देशभरका २४ प्रतिशत संक्रमितको ‘ट्राभल हिस्ट्री’ छैन ! कहाँबाट सर्यो संक्रमण? – Health Post Nepal
२०७७ असार २३ गते १९:५२
सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएका आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरेको छैन। तर, हालै इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले निकालेको एक तथ्यांकमा २४ प्रतिशत संक्रमितको संक्रमण स्रोत फेला परेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय वा नेपालकै संक्रमण फैलिएका जिल्लाको समेत ‘ट्राभल हिस्ट्री’ नै नभएकामा संक्रमण दर बढिरहेको देखाएको छ । सबैभन्दा बढी ट्राभल हिस्ट्री नभएका वागमती प्रदेशमा ३६ प्रतिशत र प्रदेश २ मा ३५ प्रतिशत रहेका छन्।
महाशाखाले यी दुई प्रदेशलाई रेडजोनमा समेत राखिसकेको छ। महाशाखाको तथ्यांकअनुसार प्रदेश ५ र कर्णालीमा २८–२८ प्रतिशत, प्रदेश १ मा १० र सुदूरपश्चिममा २ प्रतिशत समुदायमा स्रोत पहिचान हुन नसकेका संक्रमित छन् ।
जनस्वास्थ्य विज्ञअरुले पहिलादेखि नै समुदायस्तरमा संक्रमण गइसकेको र संक्रमणको खोजी गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सरकारले सूचना लुकाएर गल्ती गरिरहेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन्।
संक्रमितको अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल हिस्ट्री पत्ता लगाउनेमा भारत र अन्य देशको अनुसन्धान गरिएको महाशाखाले जनाएको छ। जसमा १२ हजार ८९ पुष्टि भएको केसलाई लिएर ९ हजार १ सय ८६ (७५ प्रतिशत) लाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुसन्धान गरिएको थियो।
९७ प्रतिशत प्रतिशत हिस्ट्री लिइएकोमा ७४ प्रतिशत केस अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल हिस्ट्री पाइएको छ। २४ प्रतिशत बिना ट्राभल हिस्ट्री भएका मानिसमा संक्रमण पुष्टि भएको महाशाखाको तथ्यांक छ।
महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भने संक्रमितमध्ये ९५ प्रतिशतको ट्राभल हिस्ट्री भएको दाबी गरे ।
‘महाशाखाले निकालेको भए म हेर्छु,’ उनले भने, ‘केही गल्ती भयो होला, त्यसलाई सच्याउनुपर्ला।’ उनका अनुसार संक्रमित सबैको हिस्ट्री लिन सकिएको छैन।
‘प्रदेश २ को ३० प्रतिशत तथ्यांक नै आएको छैन, उनीहरू कहाँ–कहाँबाट संक्रमण देखिएको हो भन्न सक्दैनन्,’ उनले भने। समुदायमा फैलिएको हो वा होइन यकिन गर्नका लागि देशका विभिन्न ठाउँबाट ४४ हजारभन्दा बढीको स्वाब लिने तयारी भएको डा. पाण्डेले बताए।
‘भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मुख्य नाका र संक्रमण फैलिएको ठाउँलक्षित गरेर स्वाब लिने तयारी रहेको छ,’ डा. पाण्डेले भने, ‘७ दिनभित्र स्वाब लिइसक्ने तयारी छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल हिस्ट्री भएका संक्रमित प्रदेश १ मा ९० प्रतिशत, प्रदेश २ मा ६२ प्रतिशत, वागमती प्रदेशमा ६२ प्रतिशत छन्। गण्डकी प्रदेशमा ९४ प्रतिशत, प्रदेश ५ मा ७० प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ७१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम ९५ प्रतिशत रहेका छन्।
संक्रमण भेटिएको समुदायमा गएर कन्ट्रयाक कन्ट्रयाक ट्रेसिङबाट फेला परेका र जोखिम समूहमा रहेका मानिसको परीक्षण गर्न लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए।
उनका अनुसार क्यान्सर, दम, निमोनिया, मधुमेह जस्ता रोग लागेका मानिस र शल्यक्रियाका लागि अस्पताल पुगेका सबैको पिसिआर परीक्षण गरिनेछ।
‘उदयपुरमा संक्रमण देखिँदा संक्रमण समुदाय स्तरमा संक्रमण देखिन थालेको थियो। तर, सरकारले भएको सूचना लुकाउँदै आएको छ,’ डा. मरासिनीले भन्छन्, ‘जे हो यथास्थिति बताउनु पथ्र्यो। जसको कारण भोलि भयावह अवस्था देखिने निश्चित छ।’
सर्वसाधारणमा भारतबाट आएको मानिसलाई मात्र संक्रमण भएको मानसिकता बोकेर माक्ससमेत नलगाई हिँड्न थालेपछि थप जोखिम बढ्दै गएको उनले बताए।
पछिल्लो समय स्थिति हेर्दा अस्पतालबाट संक्रमणको दर बढिरहेको उनको आँकलन छ। अस्पतालको व्यवस्थापनमा पहिलाको बानी अहिले पनि कायम रहेको उनी बताउँछन्। ‘९ बजेदेखि ११ बजेसम्म भीडभाड गरेर ओपिडी काउन्टर खोल्ने गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘कोरोनाले परिवर्तन खोज्यो तर अस्पतालले व्यवस्थापन परिवर्तन खोजेन।’
२–३ घण्टाको सिफ्ट गरेर विभिन्न विभिन्न विभागको अलग–अलग समयमा ओपिडी चेकजाँच गरेको भए संक्रमण हुने जोखिम कम हुने उनी बताउँछन्।